डोनाल्ड ट्रम्पको यस्तो नयाँ खुलासाले विश्व नै चकित, अमेरिकाभर त्रास — Sanchar Kendra
१तोलामा १७०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
२विप्लवसहितका ४ दलको जनसभा आज इटहरीमा, क कसले गर्दैछन सम्बोधन ?
४राती १२ बजेबाट लागु हुने गरि ओली सरकारले गर्यो फेरि यस्तो नयाँ निर्णय, जनता मारमा पर्ने निश्चित
५यस्ता छन मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ३२ निर्णय
६महासंघको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै १३ पत्रकार संगठनले जारी गरे पाँच बुँदे प्रतिवद्धतासहितकाे संयुक्त विज्ञप्ति
७ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावबारे प्रचण्ड-नेपाल समूहले के गर्यो निर्णय ?
८बच्चाबाट गरिने बचतको महत्व देखाउदै नबिल बैंकले ल्यायाे यस्तो नयाँ भिडियाे, हेर्नुहोस् भिडियोसहित
९गुल्मीमा बोराभित्र भेटियो युवतीको शव
१०नेकपा र सूर्य चिन्ह हाम्रै हो, घोषणा हुन मात्र बाँकी छ- प्रचण्ड
११प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसददेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई हटाइदिने ओलीको चेतावनी
१२ममाथि खतरा छ, शारीरिक हमला भयो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला- प्रधानमन्त्री ओली
डोनाल्ड ट्रम्पको यस्तो नयाँ खुलासाले विश्व नै चकित, अमेरिकाभर त्रास
एजेन्सी। चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना संक्रमितको संख्या अमेरिकामा विश्वकै बढी भएका बेला राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एउटा डरलाग्दो तथ्यङ्क प्रस्तुत गरेका छन । ट्रम्पले अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण हुने मृत्यु ‘अबको दुई हप्तामा सबैभन्दा धेरै भन्दै उनले जनतामा त्रास उत्पन्न गराएको छ ।
ह्वाइटहाउसमा भएको एक पत्रकार सम्मेतनमा बोल्दै ट्रमले जून १ देखि अमेरिका ठिक हुने पनि बताएका छन । पत्रकार सम्मेलनमा महत्पूर्ण निर्णय गरेको जानकारी दिदै उनले सोसल डिस्टेन्सिङको नियम ३० अप्रिलसम्म जारी रहने बताए ।
ट्रम्पले कोरोनाभाइरसको औषधि पत्ता नलागेपनि अरु देशहरुले जसैगरी आफ्नो देशले पनि उपचार गर्ने निर्णय भएको सुनाए । उनकाअनुसार मलेरियाको औषधी आइड्रोक्सिक्लोरोक्विन कोरोना भाइरसका लागि निकै प्रभावकारी भएकाले त्यसको प्रयोग गरिने छ ।
उनले न्यूयोर्कमा ११ सय बिरामीलाई यही औषधी दिएको बताए । ट्रम्पले भने, ‘हेरौं, के हुन्छ । हामीले केही अद्भूत परिणाम देख्न पाउछौं कि?’ ह्वाइट हाउसको पहलमा प्रोजेक्ट एयरब्रिटमार्फत् अस्पतालमा आवश्यक सामान पु–याउने काम तीब्र गरिनेछ । यसको सुरुवात चीनबाट आएका १ लाख ३० हजार फेस मास्क बाँडेर भइसकेको छ ।’ उनले भने